UMark Powell kunye nemifanekiso yakhe kwiileta zeVintage, iimephu kunye neemvulophu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umphezulu wokuzoba okanye ukupeyinta umzekeliso awunakukhathalela, ukuba umntu unobuchule obaneleyo kunye nobuchule bokuza nazo kwaye uyazi indlela yokufumana okuninzi kuyo. Ayizukuba sisihlandlo sokuqala ukuba sibone imisebenzi emincinci yobugcisa kwi-napkin okanye iphepha eliqhekekileyo kwincwadi yamanqaku apho umntu enze khona isifundo okanye enze inqaku ngombono owenzeke kubo ngalo mzuzu.
Yinto esinokuyifumana koku Uthotho lomsebenzi weediliya nguMark Powell. Igcisa elingahlali lisebenza kwiindawo eziqhelekileyo kwaye lisebenzisa usiba lwalo kwimizobo nakwimizekeliso. Sebenzisa iimvulophu zokuvuna, amaphephandaba, kunye neemephu ukwenza loo mifanekiso iqingqiweyo yabantu kunye nezilwanyana uninzi lwabo olufunda i-anatomy yabantu okanye yezilwanyana.
Ngale ndlela, uPowell ukwadibanisa umsebenzi wakhe kunye ibali elibalisa enye into, kuba egxila kokubini kwimizobo nakwiphepha alisebenzisela yona, ngenxa yoko kuyilwa indibaniselwano enomdla. Ngokuchanekileyo kulo mxube apho uthotho lwemisebenzi yakhe ithatha elinye iqumrhu kwaye inokubonwa ngenye indlela ngokungathi yayiqokelelwe ngamanye amaxesha.
Amagama akhe: "I-canvas endiyikhethileyo inebali kwaye ibonisa qhekeza ixesha okanye indawo, kufana nobuso endikhetha ukubazobela. Bayancedisana ngokugqibeleleyo kwaye ndiyathemba ukuba oku kukhokelela kumbukeli ukuba acinge, kwaye mhlawumbi enze, ibali kubo bobabini. Andifane ndidibanise umzobo kunye ne-canvas ngokungathi bobabini bangabaziyo kum.»
Un Umsebenzi onomdla kakhulu kwaye onokufikelela kuyo iwebhusayithi yabo apho unokufumana khona eminye yemisebenzi yakhe elandela elo qumrhu kunye nesimbo esithile nesisisa kwezinye iindawo ekubonakalisweni kobugcisa.
Izilwanyana ezininzi ezivela kulo mculi Norwegian.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso yeepeni kwiimephu zeediliya, iileta kunye neemvulophu nguMark Powell